Semalt: Google Analytics Spam Traffic uye Nzira Dzokudzivisa
Jason Adler, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anofunga kuti hazvingakanganisi kutaura kuti Analytics spam ndeimwe yematambudziko makuru kune webmasters mazuva ano. Iyi nhaurwa yakave yakakurumbira, uye pane nzira dzakawanda dzokugadzirisa nyaya iyi. Google yakagadzira chikamu chekusimbisa spam pamusana peji, iyo inoreva kuti tipei ruzivo rwakakosha kuitira kuti tive nekugadzirisa dambudziko redu. Muongorori weGoogle Analytics Adam Singer akasimbisa kuti kambani iyi iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri - agri world inc. Zvisinei, zvinotora nguva, uye zuva chaiyo harina kuzivikanwa. Pakutanga, vakatsvaga mabhuku anopfuura 259 eGoogle Analytics, asina mavairasi uye spam. Vakasimudza mafiritsi uye vane zvishoma zvemashure makumi maviri nemashanu kushanyira kutarisa zuva rega rega. Zvose zvinoshandiswa pakutengesa spam zvakapfuura gumi kubva muzana, uye anenge makumi mashanu kubva muzana emawebsite akange ane spam yematokari kubva pamadzinesi mazana mashanu. Iwe unofanira kufunga kushandisa mashandisi aya achakubatsira kuti uchengetedze data yako yeGoogle Analytics uye zvinyorwa kusvika panguva uye pasina spam.
Ndiyo yakamhanya spam blocker inozvishandura payo nguva dzose. Nokufamba kwenguva, inovandudza mazita evanhu vanodarika makumi mashanu evanhu vane mazita asina kukodzera ane URL dzinoshungurudza uye inosvina iyo mazano kuti akupei mhinduro dzakanakisisa uye dzakakosha. Icho chishandiso chinowanikwa pasina mari, ine chinyararire uye chinoshandiswa-chinoshandiswa pakushandura neine zvakawanda zvekutsvaga..Uyezve, inogona kuongororwa neakawanda maakaunti, uye maonero ayo ari nyore kuiswa. Nharaunda yaro yepamusoro inopfuura zviuru gumi zvikumbiro pazuva, asi iwe unofanirwa kuvandudza mafaira ako nguva dzose paunowedzera mazita matsva pane iyi.
Regai ndikuratidze pachena kuti Analytics Toolkit haisi yebhadharo; iwe unofanirwa kuribhadharira $ 15 pamwedzi kuti uwane zvose zvayo, asi mutengo wacho wakaderera kupfuura musoro wekugadzirisa chinhu ichi chinogona kubvisa. Icho chimwe chezvishamiso zvinoshamisa uye zvakanakisisa sezvo inowedzera mararamiro ako eGoogle Analytics uye inopa iwe nemigumisiro yakarurama kwazvo. Iri shandura rinongodzokorora zvinyorwa zvaro, naizvozvo haufaniri kuita chero basa ripi zvaro pose paunoisa madzinza matsva. Iwe unogona kushandisa ma filters pane marudzi ose edzimba, maonero, uye nhoroondo. Chigadzirwa chacho chine ushamwari-chakanaka uye chinonyatsonzwisiswa. Chikamu chakanakisisa ndechekuti haina chikamu chepota, izvo zvinoreva kuti iwe unogona kuwedzera mazita emadzimai uye ma subdomain sezvinobvira. Zvisinei, iwe unofanirwa kunyoresa uye kubvumidzwa, uyewo kubhadhara mari yekuwana iyo chigadziro uye zvayo zvakasiyana-siyana.
Spam Filter Installer ishizha rakasununguka uye software yakasununguka. Icho chimwe chezvinyorwa zvakanyatsoshandiswa zve spam filter zvishandiso paIndaneti. Zviri nyore kutora uye ine zvakawanda zvezvinhu. Izvi zvinogona kushandiswa kunzvimbo yako uye rine maonero ehutano uye nzvimbo kuti uzvisarudzire kubva. Icho chigoni chinogona kushandiswa chete pane imwe nzvimbo kubva pane imwe nguva uye ine chikamu chepamusoro chevashumiri zviuru zviviri pazuva. Uyewo, nhamba yefriji uye domains haina kuongororwa zvakarurama, uye ichocho chirevo chikuru chechiri ichi.